GỤỌ NKE Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bicol Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Fijian Finnish French Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kannada Kazakh Kikamba Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Latvian Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Marathi Mauritian Creole Maya Mongolian Nepali Norwegian Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sango Serbian Serbian (Roman) Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Tshiluba Turkish Turkmen Turkmen (Cyrillic) Tuvaluan Tzotzil Ukrainian Urdu Uzbek Vietnamese Waray-Waray Wolaita Yoruba Zapotec (Isthmus)
Ndị Kraịst hà kwesịrị ikpegara Jizọs Kraịst ekpere?
Mba. Jizọs kụziiri anyị ka anyị na-ekpegara Jehova ekpere. Ekpere ya gosikwara na ọ bụ Nna ya ka anyị kwesịrị ịna-ekpegara ekpere. (Mat. 6:6-9; Jọn 11:41; 16:23) N’ihi ya, ọ bụ Chineke ka ndị mbụ soro ụzọ Jizọs kpegaara ekpere, ọ bụghị Jizọs. (Ọrụ 4:24, 30; Kọl. 1:3)—1/1, peeji nke 14.
Olee ihe ndị anyị ga na-eme kwa afọ iji kwadebe maka Ncheta Ọnwụ Jizọs?
Otu n’ime ha bụ ịna-agụ Ọgụgụ Baịbụl maka Ncheta Ọnwụ Jizọs. Anyị nwekwara ike iwepụtakwu oge gaa ozi ọma. Anyị kwesịkwara ịna-ekpe ekpere ma na-atụgharị uche n’olileanya Chineke mere ka anyị nwee.—1/15, peeji nke 14-16.
Olee ihe mechara mee ndị mkpọrọ abụọ ahụ kọọrọ Josef nrọ gbara ha gharịị?
Josef gwara obu ihe ọṅụṅụ Fero na a ga-akpọghachi ya n’ọrụ ya. Ma ihe nrọ onye na-emere Fero achịcha pụtara bụ na a ga-egbu ya, kwụwa ya n’osisi. Ihe ahụ Josef kọwaara ha mere. (Jen. 40:1-22)—2/1, peeji nke 12-14.
Olee onyinye pụrụ iche e nyere ụmụnna nọ na Japan?
E wepụtaara ha otu akwụkwọ nta. Ihe dị na ya bụ akwụkwọ Matiu nke si ná Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ. Ha na-enye ya ndị mmadụ n’ozi ọma. Ọtụtụ ndị ihe gbasara Baịbụl na-edochaghị anya na-enwe mmasị ịgụ ya.—2/15, peeji nke 3.
Olee ihe ndị mere n’oge ndịozi Jizọs mere ka ozi ọma ruo ọtụtụ ebe?
Oge udo e nwere na Rom mere ka ọgba aghara ghara ịdị. Ndị Kraịst mbụ si n’okporo ụzọ ndị a rụrụ n’oge ahụ gaa kwusaa ozi ọma n’ebe dị iche iche. A na-asụ Grik n’ọtụtụ ebe n’oge ahụ. N’ihi ya, ọ dị mfe iji ya zie ndị mmadụ ozi ọma, ma ndị Juu bi n’ebe dị iche iche ndị Rom na-achị. Ndị na-eso ụzọ Jizọs jikwa iwu ndị Rom na-akwado ozi ọma ha na-ekwusa.—2/15, peeji nke 20-23.
Gịnị mere ezi Ndị Kraịst anaghị agba Ista?
Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha na-echeta ọnwụ ya, ọ bụghị mbilite n’ọnwụ ya. (Luk 22:19, 20)—3/1, peeji nke 8.
Kemgbe afọ ndị na-adịbeghị anya, gịnị mere akwụkwọ anyị anaghịzi ekwukarị gbasara ihe akụkọ ndị a kọrọ na Baịbụl nọchiri anya ya?
Baịbụl kwuru na ụfọdụ ndị a kọrọ akụkọ ha na Baịbụl nọchiri anya ihe ndị ga-eme n’ọdịnihu. Otu ihe atụ bụ ihe Pọl kwuru ná Ndị Galeshia 4:21-31. Ma, ọ bụrụ na Baịbụl ekwughị ya hoo haa, anyị ekwesịghị ichewe ma ọ bụ kwuwe na e nwere ihe akụkọ a kọrọ na Baịbụl nọchiri anya ya. Anyị kwesịrị ịgba mbọ ka anyị mata ihe anyị ga-amụta n’ihe ndị a kọrọ akụkọ ha nakwa n’aka ndị a kọrọ akụkọ ha. (Rom 15:4)—3/15, peeji nke 17-18.
Gịnị mere iberibe akwụkwọ papaịrọs a chọtara n’otu ebe a na-ekpofu ihe n’Ijipt oge ochie ji baa uru?
N’ihe dị ka n’afọ 1920, a chọtara otu iberibe akwụkwọ papaịrọs e dere amaokwu ụfọdụ si n’Oziọma Jọn. O nwere ike ịbụ na e dere ya ihe dị ka afọ iri abụọ na ise Jọn onyeozi nwụchara. Ihe e dere na ya gosiri na ihe dị na Baịbụl mbụ na ihe dị na nke anyị nwere taa bụ otu nakwa na ihe e dere na Baịbụl bụ eziokwu.—4/1, peeji nke 10-11.
Gịnị mere ịchụpụ onye na-ekweghị echegharị n’ọgbakọ ji egosi na Chineke hụrụ anyị n’anya?
Baịbụl kwuru banyere ịchụpụ onye mmehie na-ekweghị echegharị n’ọgbakọ, nke nwere ike ịba ezigbo uru. (1 Kọr. 5:11-13) Ọ na-eme ka a sọpụrụ aha Chineke, ka a ghara imetọ ọgbakọ Ndị Kraịst nakwa ka anya doo onye mere ihe ọjọọ.—4/15, peeji nke 29-30.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Ì Chetara?